Accueil > Gazetin'ny nosy > INTY SY NDAY: Rahoviana no hanomboka hihatra ?
INTY SY NDAY: Rahoviana no hanomboka hihatra ?
Nahita marimaritra iraisana izany ankehitriny ny vondron’ny mpandraharaha-mpampiasa eto Madagasikara sy ny foibe sendikaly isan-tsehatra izay misolo tena ny mpiasa Malagasy fa hasondrotra 8% ny karaman’ny mpiasa tsy miankina amin’ny fanjakana amin’ity taona 2018 ity. Ny karama ho an’ireo mpiasa manana sokajin’asa (catégorie professionnelle) farany ambany (M1) ka vao miditra miasa izany dia 168.023 ariary no horaisiny rehefa mihatra io fisondrotana io raha 155.523 ariary izany hatreto. Io no fetra farany ambanin’ny karama (Salaire minimum d’embauche).
Ho an’ny mpiasa izany dia tsy hoe io no sahaza ny mpiasa amin’ny ankapobeny fa ireo amin’io sokajin’asa io no tokony mandray an’io. Raha vao manana fahaizana kely fotsiny ianao fa tsy irakiraka (manoeuvre), ny asanao, ohatra, mpanatitra taratasy (coursier) dia efa tokony ho sokajin’asa hafa no misy anao satria mitaky fahaizan-taratasy izany, farafahakeliny. Toraka izany koa ny mpamily, ny mpandray olona ao ampiasana (standardiste), sy ny hafa.
Ny mampalahelo eto Madagasikara mantsy dia ilay karama farany ambany no hoe hajaina ka na olona misahana fikirakirana milina solosaina (informaticien) aza faly sy mionona raha vao mahita asa ka karamaina mitovy amin’io farany ambany io na somary amboniny kely.
Raha ny rariny sy ny hitsiny izany dia efa tokony avy dia mampihatra an’io fanondrotan-karama io ny orin’asa isan-tokony, saingy misy ny mpampiasa manao be marenina ka miandry didim-pitondrana (arrêté) mivoaka. Ny sasany aza na efa mivoaka ny didim-panjakana dia mbola manao rainazy tsy mety manondrotra.
Ka rahoviana no hivoaka io didim-pitondrana mampihatra an’io fanapahan-kevitry ny mpampiasa sy mpiasa io? Ary hanomboka rahoviana ny fisondrotra ny karama. Tokony manomboka volana janoary aloha e! Izany hoe tokony manonitra (rappel) ny mpampiasa.
Dia ahoana ny fanaraha-maso ny fampiharana azy io? Mahefa ny amin’izany ve ny fanjakana amin’ny alalan’ireo mpisafo raharaha momba ny asa (Inspection de travail)? Raha misy orin’asa tsy mampihatra an’io didy io amin’izay fotoana, inona no azon’ny fanjakana hatao?
Ankoatr’izany, misy amin’ny orinasa koa aloha no ho sahirana na hampihatra ny ampahan’io fisondrotana io aza e! Iaraha-mahafantatra ny olana ara-toekarena ankapobeny eto amintsika amin’izao fotoana sy ny akon’izany ara-tsosialy. Mba misy fepetra azon’ny fanjakana raisina ve amin’ny fanampiana ny seha-pandraharahana isan-tokony, ka tsy hahafaty ny orinasa fa hampivelatra azy ireny aza, mba ho fanoitran’ny fampiroboroboana ny toekarem-pirenena sy hanarina ny lafiny ara-tsosialin’ny mponina?
Ny azo antoka aloha dia tsy tafiditra ao anatin’ny rafi-pisainan’ny fitondrana Hvm mihitsy izany satria tsy olana aminy fa olan’ny vahoaka. Noho izany, tsy any amin’ny fitondrana Hvm no tokony hiantefan’ny fanontaniana fa fehezan-teny tokony hotsakotsakoin’ny vahoaka izany amin’izao fotoana tokony hirosoan’ny vahoaka amin’ny tena fanovana ifotony eto amin’ny tany sy ny fanjakana izao.